Teknụzụ ọhụụ maka igwe ịcha laser |
Welding ngwakọ laser na -agbaji njedebe brazing
Isi mmalite: Ringier- “Ndị na-emepụta laser mba ụwa” N'ọkụkụ nchara ọla kọpa, laser diode na-acha anụnụ anụnụ na-achọpụta ịgbado ọkụ ọkụ nke ihe ọla kọpa na nke mbụ ya. Agbanyeghị, teknụzụ ịgbado ọkụ nke laser na -acha anụnụ anụnụ ka nwere ụfọdụ njedebe na omimi ...
Ihe achọrọ maka ihe dị iche iche nke igwe nchara laser
Site na mmepe ngwa ngwa na teknụzụ laser sara mbara, igwe ịkpụ eriri fiber abanyela ndụ anyị site na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ime usoro anyị dị, a na -ebipụ ọtụtụ ihe dị iche iche. Agbanyeghị, mgbe ị na -eji igwe ịkpụ laser ịkpụ ihe dị iche iche, ...
Cheeron laser- ịre ahịa alibaba n'ịntanetị
site na nchịkwa na 21-05-28
Na Mee., 2021 cheeron laser (QY laser) nwere ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa n'ịntanetị. Site na mgbanwe nke ọnọdụ azụmaahịa mba ofesi, ụlọ ọrụ anyị na -atụle ịgbasa visibiliti ụlọ ọrụ anyị na ịntanetị, yabụ anyị na -ahọrọ Alibaba dịka otu n'ime ụlọ ọrụ anyị na -ere ahịa n'ịntanetị. Ch ...
Sistemụ ịkpụ ọkụ FSCUT2000
Sistemụ ịkpụ laser FSCUT2000S bụ sistemụ nchịkwa mepere emepe nke mebere nke ọma maka ụlọ ọrụ akwa akwa, nwere njiri dị mfe ịwụnye na imezi, arụmọrụ dị mma yana azịza zuru oke, ọ bụ ụdị nkwalite sitere na FSCUT2000C. Ngwa ...
Ọdịiche dị n'etiti ịgbado ọkụ TIG na ịgbado ọkụ laser
Isi njirimara nke ịgbado ọkụ laser bụ obere deformation na ntinye na -emighị emi. Njirimara argon arc bụ mmegharị ahụ siri ike, njikwa nrụrụ siri ike, na ntinye miri emi. Iji mee ka akụkụ ahụ dị gịrịgịrị, ọkara na oke, ị nwere ike họrọ ike dị iche iche argon arc weld mach ...
Mmeputakwa anya anwansi na ihe fọdụrụ
site na nchịkwa na 21-02-05
Kedu ihe bụ mkparị anya? Kedu ihe ọ baara gị? Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịse foto? Kedu ihe bụ mkparị anya? Ị nwere ike were phohos maka ihe ndị ọzọ wee bubata n'ime ngwanrọ, wee jiri igwefoto chọpụta ihe ahụ fọdụụrụ. Site na ngwanrọ ma dezie ka ebipụ. Kedu ihe ọ baara gị? Zọpụta gị ...
Igwe ịcha ọkụ laser nwere nkwalite - ịdị mma dị elu
Ihe karịrị afọ 40 agafeela kemgbe mgbanwe na mmeghe. N'ime nnukwu mgbanwe mgbanwe akụ na ụba a, ọkwa akụ na ụba China etoola ngwa ngwa. Mkpokọta akụ na ụba na -enwekwa ọnọdụ ụfọdụ na mba ụwa, na mmepe nke akụ na ụba ụwa nwekwara mmetụta ...
Igwe ihe nbipute laser - ibipụta na ịcha abụọ n'ime otu
site na nchịkwa na 21-01-04
Site n'iji igwe ịcha ọkụ laser eme ihe ebe niile, ụfọdụ ụlọ ọrụ ewepụtala ihe ndị ọzọ achọrọ maka igwe ịkpụ laser. Karịsịa, ụfọdụ ahịrị mgbakọ chọrọ ka igwe na -ahazi ọrụ ọrụ. Igwe ahụ nwere olile anya iji LOGO ụlọ ọrụ ahụ akara ngwaahịa ya iji nyere aka kwalite ụlọ ọrụ ...
Kedu ụkpụrụ nke ngbanwe ụzọ anya nke igwe ịcha laser?
Ọmụmụ nke igwe ịcha laser bụ ọkachasị iji melite arụmọrụ ọrụ yana ibelata izizi, n'ihi na ọrụ aka adịghị anya nkenke, yabụ kedu ụkpụrụ nke ịhazigharị ụzọ nke igwe ịkpụ laser eriri? Site n'ịgbanwe akụkụ nke oghere atọ, ụzọ ọkụ ...
Nesting Maka ihe fọdụrụ
site na nchịkwa na 20-09-15
N'ime usoro nrụpụta ụlọ mmepụta ihe, a na -enwekarị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ihe foduru. Karịsịa maka ndị na-ere ahịa ike dị elu, iji ihe njupụta eme ihe nke ọma nwere ike ịbawanye ọnụego itinye n'ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ wee bawanye nke ukwuu ...
Nnukwu ike & Middle High Power Laser Cutting Machine Comparison
Ọkpụkpụ mbelata mụbara site na 87% ~ 493% Mmepụta Ego Igwe Igwe Laser belatara nke ukwuu
Cheeron laser-na-eje ozi maka ụgbọ okporo ígwè dị elu
Site na afọ 2017, ụlọ ọrụ anyị mebere igwe mkpuchi igwe anyị ji eme ihe maka ọgbọ ọhụrụ. N'oge afọ 3, anyị na-achọ ihe ndị ahịa chọrọ nke na-eje ozi maka ụgbọ okporo ígwè dị elu, anyị buliri igwe mkpuchi igwe anyị na-ekpuchi ọkụ site na ọgbọ nke abụọ ...